BIG SOMA 2019 : Fahombiazana ny fanokafana ny andro voalohany teny aminy Village touristique
Ekipa efapolo avy any amin’ireo distrtika maro mandrafitra ny faritanin’i Mahajanga no tonga nifaninana amin’y taranja "beache soccer" open tamin’ity indray mitoraka ity. 5 août 2019
Io indrindra no nampiavaka izao andiany fahaenina amin’ity hestika ara-panatanjahantena sy kolotoraly atao isan-taona eto Mahajanga io. Raha noferana isam-pokontany ny fisoratana anarana ho an’ny beach soccer tamin’izay andiany dimy sosona nifanesy izay. Dia noho ny fangatahan’ireo distrika mandrafitra ny faritanin’i Mahajanga handray anjara, dia nosokafana ho an’ny rehetra ny fifaninanana tamin’ izao andiany fahaenina izao.
Notsinjaraina ao aminy vondrona maromaro ireo mpifaninana, ary lalao roa ambin’ny folo isanandro no atao eny amin’iny torapasiky ny Village iny. Enina no lalao ataon’ireo ekipa mpifaninana ny tapany maraina, manomboka aminy valo ora maraina, ary enina torak’izany koa manomboka aminy roa ora sy sasany ny tapany tolakandro, noho ny fahamaroan’ireo mpifaninana ireo. Amboara kalisy miampy omby matavy iray no hatolotry ny mpikarakara ho an’izay ekipa hivoaka mpandresy amin’io lalao baolina kitra ambony torapasika na ny beach soccer open ity, ka efa nanomboka ny zoma 02 aogositra teo ny kiririoka voalohany tamin’io lalao io, raha ny alahady 11 aogositra kosa no hanaovana ny lalao famaranana.
Ny zoma 09 aogositra ho avy izao no hanomboka ireo hetsika ara-tsosialy ny tapany maraina, toy ny efa fanao isan-taona. Koa ireo akany fitaizana zaza kamboty, toa ny ao Mangarivotra, ny eny amin’ny Semama na ny sekolin’ny moana sy marenina eny amin’ny loterana Antanimalandy, ny akany fibeazana zaza niangaram-bintana eny aminy Don Bosco Antanimasaja, ary ny ao aminy Cdef Mangarivotra, no hitondran’i Orlando Robimanana, filoha mpanorina ny big soma izay fanampiana ny sahirana izay.
Fa hitapolaka kosa ny tapany hariva ny 09 aogositra io ny eny aminy Esplanade ny village, amin’ireo hetsika ara-javakanto, dia ny fifaninanana hisafidianana izay tovovavy sy tovolahy tsara tarehy na ny "Miss sy ny mister" amin’ity andiany fahaenina ity. Hifanindran-dalana amin’io daty io koa ny fifaninanana baskety baolina hoan’olona telo ambony kianja, sy ny "tirres ahazoana isa telo" sy ireo maro hafa. Tsy mivaona tamin’ny namoronana ity hetsika Big soma ity ny mpikarakara, fa ny hampiroboroboana ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny ara-javakanto sy ny hitsimbinana ny sosialim-bahoaka no tanjona hoy i Crépin Andrianjafy, tompon’andraikitra ny serasera.
Fa ny ngeza indrindra dia ny nahazoan’i Mahajanga ity fotodrafitr’asa lehibe hialana voly sy hitsangantsanganan’ireo vahiny na tompon-tanàna, eny amin’iny torapasiky ny village iny hatraminy nanombohana ny "Big soma" enina taona lasa izay. Marihina fa maimaim-poana avoka na bojo zaka jiaby araka ny vinan’ ny Big soma, na ireo mpandray anjara mpifaninana na ny fanarahana akaiky ireo hetsika maro loko ireo.